Munamato kuSan Ramón Nonato? To Kunyarara Miromo Uye Vakadzi Vane Pamuviri
Munamato kuSan Ramón Nonato Ndicho chishandiso chakanakira vakadzi vane pamuviri nekuti chinozivikanwa seumwe wevatsvene vanonyanya kubatsira avo vane pamuviri.
Zvirokwazvo anogona kukumbirwa zvimwe zvinhu izvo iye, zvisinei nemamiriro acho ezvinhu, zvaachareverera pamusoro pedu.
Minamato ine simba kwazvo, hatigone kurerutsa masimba avo.
Vamwe varasa kutenda uye zviri nekuda kwenzvimbo iyo nyika yanhasi asi tariro chete yatinayo haifanire kurasikirwa.
Kubudikidza munamato tinokwanisa kuita zvese zvirinani uye kana paine mamiriro akasimba muhupenyu, tinogona kupotera mairi kuti tiwane simba uye toenderera munzira.
1 Munamato kuna Saint Ramón Nonato Iye ndiani?
1.1 Namata kuna San Ramón Nonato kuvhara miromo
1.2 San Ramón Nonato munamato unopesana nekuita makuhwa
1.3 Kune vakadzi vane nhumbu
Munamato kuna Saint Ramón Nonato Iye ndiani?
Izita rekuti non natus, zvinoreva kuti mwana asati aberekwa.
Yakatenderwa nekuti amai vacho vakarasikirwa neupenyu vasati veSan Ramón vasati vaona mwenje wenyika itsva yaizomugamuchira. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei ave mumwe wevatsvene kuvakadzi vane pamuviri.
Nyaya yake inodzokera kugore ra 1200 iyo yaive nguva yekuzvarwa, mushure mekunge ave mukuru kutenda kwake kusingazungunuke kwakaenda naye kuAfrica uko akabatsira vazhinji semununuri weutapwa.
Basa rako guru kwaizozvipira vamiriri vevamwe vasungwa Vakanga vari mumamiriro ezvinhu akashata.
Mushure mekutambudzika zvisingaite iye iyeye maiguru akarayira kuti vabate zvirinani nepfungwa yekuti vanunure.
Nekudaro, San Ramón Nonato aive nebasa rekutevera kuparidza nekubatsira avo vaiida uye pakangomutongera mutongi kuti afe, mutongo wakadzivirirwa nekuti ivo vakabhadhara rudzikunuro rwake uye akasunungurwa.
Namata kuna San Ramón Nonato kuvhara miromo
Saint Ramon Nonato nekuda kwesimba rauinaro uye kuti Mwari vakupa iwe chindipa izvo zvandinokumbira uise kukiya mumuromo kune avo vanoda kundiitira zvisiri izvo.
(Taura zita remunhu / vanhu)
Vanhu vanotaura zvakaipa pamusoro pangu kana kundiitira zvakaipa, vanoda kundiisa pakaipa, ndinovhenekera kenduru iyi kuti iwe uvhare miromo yako.
Uye unozadzisa zvandinokumbira kwauri, nekuti iwe wakaparidza neshoko raMwari, zvakaiswa senge kuturikwa kutakura mukiya mumuromo mako.
Teerera kumunamato wangu Saint Ramon Nonato kunyarara miromo nekureverera pamberi paMwari Baba kune avo vanotaura zvakaipa nezvangu vanopera mukuyedza kwavo Mwari vane masimba ese vakakupai.
Chishuwo chinopisa chekusunungura Varanda, nguva dzose chinonditadzisa kubva kunhema dzakaipa, kubva kuvavengi, kubva kune vatengesi.
Kune veavo vanoda kundikuvadza, ndiite kuti ndirarame murunyararo uye ndisvire kure nevaya vese vanondindama uye kunditambudza.
Kuti nekuda kwegodo, zvakaipa kana kuvenga, ini ndoda zvakaipa kubva kune avo vanoda kundinyadzisa neyekunyomba kwavo, San Ramón Nonato.
Nerunako rwako rukuru, usasiye chikumbiro changu chisina kutarisira ndinokukumbira kuna She wedu Jesu Kristu.
Kana iwe uchida kuvhara miromo, uyu ndiwo munamato wakakodzera weSan Ramón Nonato.
Izwi raMwari rinopa yambiro pamusoro pekuti kune ngozi zvakadii inogona kuve mutauro wevanhu, kutaura kunogona kazhinji kuuraya kupfuura pfuti.
Ndokusaka mune chechi yechikatorike uye wepasi rose waKristu tinotenda kuti San Ramón Nonatos inogona kutibatsira kunyarara miromo iyo yakavhurika ichitikuvadza nenzira yakaipa.
Iyi nhanho yerunyararo pamberi peichi chiitiko chinokuvadza nekuti isu hatidi kutsiva, asi tinokumbira kuti ndiye musande uyo ari kuita basa rekuvhara avo vari kutikuvadza.
San Ramón Nonato munamato unopesana nekuita makuhwa
Ah, anozivikanwa Saint Ramon Nonato, iwe, nekuraira izwi raMwari, anokugadza kuti utambudzire kutakura kiyi pamuromo wenyaya.
Inzwa ejaculation yangu uye upindire pamberi paMwari Ishe wedu kuti avo vanotaura zvakaipa pamusoro pangu Gumisa kuedza kwavo uye ini ndichadzivirirwa kubva kune chero yakaipa uye inokuvadza meseji kana chinangwa ...
Ndapota, Mwari wangu Wekumusoro-soro, uyo akapa Saint Ramon Nonato shungu yekusununguka kwevaranda vakasununguka, achikuda iwe murevereri wake.
Nguva dzose ngandibvise pakuzviisa pasi, kubva pachivi chinondiparadzanisa nemi, uye kuti ndibudirire murunyararo uye ndikasarira shure kune vese vanondituka uye vanonditambudza.
Kuti iye anokwanisa kuve akaparadzaniswa nekusingaperi kubva kune vanopikisa avo, kune chero, kusarudzika kana chigumbu, vanondishuvira zvakaipa.
Kana kuti vanoda kundidenha nekuzvidzwa kwavo.
Mwari muiti, ini ndinoziva kuti iwe nengoni dzako huru, uye nekupindira kweSamu Ramon Nonato, hauzoregi chikumbiro changu chakazvidzwa.
Ndinokukumbira, kubudikidza nechisiko chako, Jesu Kristu, Ishe wedu anodikanwa, aripo uye anotonga pamwe chete nemi muMweya Mutsvene Mutsvene Ramon Nonato.
Iwe unogara padhuze padhuze naMwari bvunza iye nezvematambudziko angu, kuti ini handimboshaya dziviriro yako nedziviriro, kuti nhaurwa yako yakakurumbira indibatsire mumaminitsi ese akashata uye yakaoma mamiriro.
Makuhwa chinhu chakaipa chinogona kukuvadza mhuri, hushamwari kana nzvimbo yebasa. Vakawanda kusagadzikana uye kukuvara zvakanyanya nehungwaru kwazvo zvekuti isu hatigone kuziva kusvikira zvakaipa zvaitika.
Munamato weSanta Ramon Nonato mukurwisa makuhwa Inobatsira iwe kuchengetedzwa kubva kune ichi chakaipa.
Tinogona kukumbira isu kana shamwari kana shamwari iri mumamiriro ezvinhu ekusagadzikana.
Chinhu chakakosha pamusoro pemunamato uyu uye nezvizhinji, iko kutenda kunoitwa nakoIsu tinofanirwa kuvimba kuti kana tikabvunza, ipapo mhinduro yehungwaru ichagara ichisvika kwatiri, kunyangwe zviine mamiriro akadii isu.
Kune vakadzi vane nhumbu
Ah San Ramón Nonato anosimudzira.
Kwamuri ndinouya nemufaro netsitsi huru dzaunobata nevanodzidzisa.
Gamuchira, iwe Mutsvene wangu, iyi minamato yandinokupa nemwoyo unoda, muchirangarira minamato yako yakakodzera, zvekuti ivo vakasvikira kuna Mwari vakakuitira iwe mutungamiriri wevakadzi vane nhumbu.
Hezvinoi, Mutsvene wangu, mumwe wavo anozvininipisa pasi pekudzivirirwa nekudzivirirwa, achikumbirisa kuti sekungotsungirira kwako kwagara kuchisarudzwazve mumwedzi misere iyoyo iwe yawakaurayirwa zvakasarudzika ne padlock.
Uye mamwe marwadzo awakapedza mukati megomba rine rima uye mumwedzi wechipfumbamwe wakasiya matirongo ese akasununguka, saka Mutsvene negweta rangu, ndinokumbira nekuzvininipisa kuti usvike kwandiri kubva kuna Mwari wangu naIshe ...
Kuti icho chisikwa chakavharirwa mukati medumbu rangu chengetedzwa muhupenyu uye hutano kwemwedzi misere, mune yepfumbamwe enda wakasununguka muchiedza chenyika ino, kukuita iwe, Mutsvene wangu, kuti pamwe nezuva rakabuda mweya wako Pamuviri wako raive zuva reSvondo, rino izuva remufaro nemufaro, zvekuti zuva rekuzvarwa kwangu ndewekugutsikana nemufaro, nemamiriro ese aya aunoziva unokodzera rukudzo rukuru rwaMwari newe neruponeso rwangu. mweya neiwo womwanakomana wangu.
La munamato wevakadzi vane nhumbu de San Ramón Nonato ndeimwe yeakanakisisa iwe yaunogona kunyengetera.
Anotendeka anodzivirira wevanonyanya kudiwa, San Ramón Nonatos asingazivikanwe semubatsiri mukuru kana mununuri wevakadzi vane pamuviri.
Isu tinoziva kuti kuve nepamuviri humwe hupenyu mamiriro anoita kuti munhu asakuvara.
Mune chero mamiriro ezvinhu e emergencyKana nhumbu ine njodzi huru kana rimwe dambudziko rikaitika, mutsvene uyu anova hutiziro hukuru.
Munguva yese yekuita gestation inokurudzirwa kuita chiitiko kuSan Ramón Nonato yevakadzi vane pamuviri zuva rega rega iyo kereke yeKatorike yakanyatsogadzirira iyi nguva yakakosha muhupenyu hwe munhu wese.
Chinhu chinongodiwa chete kutenda kwakumbirwa nacho.
Kune zvakawanda vatendi vanozviti vakatambira rubatsiro kubva kumutsvene uyu pane imwe nguva pavaida iyo.
Sezvo aive ari pasi pano, anga ane hanya nekubatsira vanoshaya zvisinei nekurasikirwa kana kukanganisa kwavo vamene hutano kana kusununguka munzira.
Chaaigara achiitira hanya nekubatsira uye kuchengeta kutenda mumunhu wese waaisangana naye.
Izvi zvinoramba zvakadaro nanhasi, kunyangwe makore mazhinji apfuura kubva pakufa kwake, San Ramón Nonato achiri kuenderera nekubatsira panguva yakafanira kune avo vari mumamiriro ezvinhu panjodzi yemweya kana yemweya.
Nekudaro, kutenda ndicho chakavanzika chinoita kuti munamato wega wega uve nesimba, iro Bhaibheri dzvene rinotikurudzira kukumbira pane nguva dzatinoda rubatsiro uye zvakare nekutenda iwo makoni akabvumirwa.
Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti namata munamato San Ramón Nonato nekutenda!